Home » Bangladesh Tri-Series 2019 » Hamilton Masakadza retire from International cricket with a win
in News, Bangladesh Tri-Series 2019
Zimbabwe captain Hamilton Masakadza played the last match of his international career against Afghanistan.In this match, Hamilton scored an unbeaten 71 off 42 balls.On the basis of his innings, he also gave his team a stunning victory by 7 wickets in this match.He gave up his 18-year cricket career with a great innings and a great win.
His side win by seven wickets
Hamilton played a stormy innings in the last bout of his cricketing career.He scored 71 off 42 balls for his team and hit four fours and five sixes in his innings.His strike rate was 169.05.His innings helped Zimbabwe beat Afghanistan by 7 wickets.In this match, Afghanistan scored 155 runs for 8 wickets in 20 overs.In response, the team of Zimbabwe won by scoring 156 runs for three wickets in 19.3 overs.
Hamilton is the only player from Zimbabwe who has played more than 300 international cricket matches.At the same time, he is the first player from Zimbabwe to score more than 1000 runs for Zimbabwe in T20 cricket.Hamilton, 36, had scored 2223 runs in 38 Tests for his team at an average of 30.04.He has five centuries to his name in Tests and his best score is 158 runs.
He scored five centuries in 209 ODIs for Zimbabwe and also scored 5658 runs at an average of 27.73.His best innings in ODIs was an unbeaten 178 runs.At the same time, he has a total of 1591 runs in 65 T20 matches.His best score in the shortest format of cricket was an unbeaten 93 runs.
He also made several records in his career.In 2014, together with Sikandar Raza, he made the biggest partnership for Zimbabwe in ODI cricket for the first wicket.Together they had scored 224 runs for the first wicket.On his tour to Bangladesh in January 2016, he held the record for most runs in T20 bilateral series.He scored a total of 222 runs in four matches on that tour.
Tags: cricketZimbabweHamilton Masakadza
Top 5 batsmen with most sixes in Test history
5 batsmen to fastest 1000 runs in T20I
Share 114914 Tweet 71822
Share 21911 Tweet 13694